ज्वाला संग्रौलाको बारे गलत गर्ने हरुको लागि आयो उनकै फेसबुक वालबाट कडा जवाफ
एति सामाजिक संजाल फेसबुक मा समाजसेवी ज्वाला संग्रौला को बारे ईडिट गरि भाईरल गतिएको छ । कान्तिपुर पत्रीका लगाएत केही अरु पत्रिकामार्फत उनको गलत समाचार ईडिट गरि भाईरल बनाएको छ । यसै क्रम मा क्रम मा ज्वाला संग्रौला ले आफ्ने फेसबुक मार्फत लेखिएको यो जान्कारी हेर्नुहोस ।
जुन समाचारको हेडलाईन बनाएर तिमी दलालका झुण्डहरुले मेरो बदनाम गर्ने प्रयास गर्यौ, त्यहि समाचारको हेडलाईन तिम्री आमा श्रीमती र बहिनीको नाममा इडिट गरिएको भए सायद उनीहरु यतिबेला मरिसक्थे होला । तर म आँट, साहस र हिम्मत भएको केटी हुँ । तिमीहरुले सोच्यौ होला , यति गरेपछि यो कि त मर्छे,
कि त चुप लाग्छे ! मैले भनिसकेकी छु, मेरो न त दिल कमजोर छ न त खुन नै । मसँग जोरी खोज्नु भनेको आफैं ध्वस्त हुनु हो । त्यो इडिट गरेको समाचार पढेर मेरा आफन्तहरु कतिपनि बिचलित भएनन् । बरु उल्टै साथ , सपोर्ट र हौसला दिएर दलालबिरुद्ग अझ ससक्त भएर जानुपर्ने सुझाब दिँदै तिमी
हाम्रो परिवारको मात्र छोरी हैनौ, सिंगों देशकै छोरी हौ, आफूजस्तै हजारौ छोरीहरुको साहस बनिराख भनेर आशिर्बाद दिए। आफ्नो ठगीको मुद्दा भड्काउन मलाई बेस्या भनेर प्रचार प्रसार गर्ने मानव तस्कर र भाडाका टट्टुहरु खबरदार ! भलै हिँजो परम्पराको नाममा कति छोरीहरुलाई कमजोर बनाएर जिउँदै चितामाथी पोलेर
सती बनाईयो होला ! तर अब युग फेरिईसक्यो, समयले नयाँ पखेटा लगाएर उड़ान भरिसक्यो! तसर्थ आजका छोरीहरु कमजोर कदापी छैनन् ! देख्यौ नि मलाइ कति माया , साथ र समर्थन गरेको छ मेरो परिवारले अनि नेपाली जनताहरुले..! हिजो तिमीहरुले गरेको कर्तुतको समाचार मैले आफैं फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छु!
त्यो मुनि आएका कमेन्टहरु पढ र आफैं बुझ कि तिमीहरुको नाङ्गो हैसियत र कमजोर धरातलभन्दा मेरो कति ईज्जत र सम्मान रहेछ समाजमा ..! म अब झन् बिद्रोही बनेर निस्कँदैछु ! अर्कोकुरो , जुन ठगीको मुद्दा ससक्त ढंगले अगाडि बढाएको छु संजालमा , त्यस्लाई पनि किनारा लगाएरै छोड्छु । यदि गल्ती स्वीकार
गरि पीडितको पैसा पहिले झैं लाईभ गरेर तिर्छु , पुरै नसके नि अलिअलि गरेर तिर्छु भन्ने सार्बजनिक अभिव्यक्ति दिएछ भने ठीक छ । हैन भने कानुनी बाटोमा पीडितहरु जानेछन्।त्यसपछिको झमेलाको पनि अनुमान लगाउँदै गर ! दलालले प्रमाण दे भनेर मसँग माग्ने हैन, आफूले सोझा चेलीबेटीलाई मेरी बाबा मु तिर्छु हल्ला नगर
भन्दै बोलेका आवाजहरु र फ़ेसबुक लाईंब गरि चारहजार डलर तिरेका भिडियोहरु नै काफ़ी छन् प्रमाणको लागि ! मेरो उदेश्य कसैले कसैलाई नलुटोस्, अन्याय र थिचोमिचो नगरोस् भन्ने हो! सस्तो लोकप्रियताको लागि सबैसँग जी हजुरी गरेर बुद्द बनेर हिँड्ने मान्छे म हैन ! असल र ख़राब छुट्याएर ख़राब बिरुद युद्द गर्ने मान्छे हुँ म त्यस्को
लागि हज़ार बार बेस्या बनाऊ मलाई , म बन्न तयार छु! किनकी मेरो एक बलिदानले सयजनाको जीबन बाँच्छ भने मलाई मेरो एकमुठी सासको क़ुर्बानी मन्जुर छ ..! ❤️
Prevखुसिको खबर: अब छिटोभन्दा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सक्दो सेयर गरि सबैलाई जान्कारी दिनुहोस
Nextप्रचण्ड भन्छन: कमरेडहरु तयार रहनुस पार्टी विभाजन हुनसक्छ